Citizen Detective & Blood Money (Episode -1-) – PVTV Myanmar
PVTV အဖွဲ့သားတွေက “ပြည်သူ့စုံထောက်နှင့် သွေးစွန်းငွေများ” အစီအစဉ် အပိုင်း (၁) အဖြစ် “ပြည်သူ့စုံထောက်နှင့် မိုဂီအမှုကြီး” ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဘာ့ကြောင့် အာဏာကိုလက်မလွှတ်နိုင်ဖြစ်နေရတာလဲ၊ ပြည်သူကို အစွမ်းကုန် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပြီး ဘာကြောင့်များ ဒီလောက်တောင် ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာနေကြတာလဲ … ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ … သူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက် အကျိုးစီးပွားအတွက် ပြည်သူလူထုကို ဂုတ်ခွစီးပြီး ဆက်လက်ဂုတ်သွေးစုတ်ချင်နေလို့ပါပဲ။ အကြောင်းအရာက ထင်ရှားပေမယ့် အချို့သော အချက်အလက်တွေကတော့ ဝေဝါးနေသေးတာဖြစ်လို့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရအောင် ပြည်သူ့စုံထောက်ကြီးက စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ အောက်ဖဲတွေကိုလှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ ပြည်သူ့သတင်းသမားကလဲ … ပြည်သူ့စုံထောက်ကြီးသိထားသမျှ ထိုးဆွနှိုက်ထုတ်ရင်း ပြည်သူကို သတင်းပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
2021-10-31 at 3:04 PM
2021-10-31 at 3:19 PM
2021-10-31 at 3:42 PM
ဖယ်ဒရေး ရှင်း ကို တကယ်လိုလား သော..ကချငိ, ကရင်, ကယား,ချင်း ,ရခိုင်, မွန်, ရှမ်း etc.
စကစ/NUG/ ပင်လုံ စာချုပ်တို့ ရှိမှ ဖယ်ဒရေး ရှင်းရမယ် ထင်နေသရွေ့..သင်တို့.. ဖယ်ဒရေးရှင်း.. ခရီးစဥ် ဝေးလံ နေမှာဘဲ..
ပြည်နယ် တိုင်း မှာရှိ တဲ့..
EAO များ..ကိုယ်ပြည် နယ်ထဲ မှာ ရှိတဲ့ PDFs များနဲ့..ပူးပေါင်းပြီး
ဖယ်ဒရေးရှင်း Army ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထောင်ကြပါ..
စစ်ရေး ခိုင်မာ မှ..နိုင်ငံ ရေး
ခိုင်မာ မယ် ဆိုတာ..အားလုံး အသိ
လွပ်မြောက် နယ်မြေတွေ ကို
အမာခံ နယ်မြေ တည်ဆောက်ပါ..
အချိန် မဖြုန်း နဲ့..
တခြား တိုင်း/ပြည်နယ် တွေလဲ
NUG ဆွဲမဲ့ ပြည်ထောင်စု အဆင့်
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ထိုင်စောင့် နေမဲ့ အစား..ကိုယ့်ပြည်နယ် နဲ့ ကိုယ်
EAO + PDFs + ပြည် နယ် တွင်းရှိ ပညာတတ် များ+ ပြည်နယ် တွင်း ရှိ မြို့နယ် ဒီမိုကရေစီ ကောင်စီ ဥက္ကဌ များ ပေါင်းပြီး
ကိုယ်ပြည်နယ်..အခြေခံ.. ဥပဒေ မူကြမ်း ကိုရေးဆွဲ ပါ..( Do it NOW)
အများ အကြိုးတွက်.. အများဆုံးဖြတ် တဲ့..တရားမျှတတဲ့..ဒီမိုကရေစီ.. ဖြစ်စေဖို့..လျှို့ဝှက် မဲခွဲ စနစ် ကို..အဆင့်ဆင့် တိုင်းမှာ
တတ်နိုင် သလောက်ကျင့် သုံးပါ..
အခြေခံ မူကြမ်း ဖြစ်လာ ဖို့..
ပြည်သူ က..လျှိုဝှက် မဲ နဲ့ ဒီမိုကရေစီ နည်းနဲ့ ရွေး တင်ထားတဲ့
မြို့နယ် တိုင်းရဲ့..မြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်..ဥက္ကဌ များ..
ဒီလိုစစ်မှန်တဲ့ ပြည် သူ့ ကိုယ် စားပြုမြိုနယ် ..ကိုယ်စားလှယ် အစစ် ရဖို့.. ရပ်ရွာ.. ပြည်သူ့ ဥက္ကဌ တွေ..ရွေးတင် ရမယ်..ရပ်ရွာ ဥက္ကဌ ရေးတင် ဖို့..ဆယ်အိမ် ခေါင်း ဆောင် တွေ ကိုယ့် ဆယ်အိမ် နဲ့ ကို ရွေး တင် ရမယ်..
ဥက္ကဌ သက်တမ်း ကို 2-4 years.
ရပ်ရွာ ဆန္ဒ အရ သတ်မှတ်ရမယ်..
ကိုယ့် ရပ်ရွာ ဥက္ကဌ ကို..ကိုယ်ရပ်ရွာ စိတ်ကြိုက်.. လျှိုဝှက် မဲနဲ့ ရွေးတင်.. ကိုယ့်မြို့နယ် ဥက္ကဌ ဟာကိုယ့် မြိုနယ် သားဘဲ ဖြစ်..
ကိုယ့်ပြည်နယ် ဥက္ကဌ ဟာ..ကိုယ့်ပြည်နယ် သားဘဲ ဖြစ် လာတာနဲ့..
ကိုယ့်ပြည်နယ်.. ဖယ်ဒရေး ရှင်း
ဒီမြို့ နယ် ဒီမိုကရေစီ ဥက္ကဌ တွေ ပါဝင် ပြီး..ကိုယ့်ပြည်နယ် ရဲ့..ဖွဲ့စည်း ပုံ အခြေခံ ရေးပြီး..
ပြည်နယ် သူ/သား..အားလုံး ကိုချပြ..မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်..>60%.. ထောက်ခံ ရင်..ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းပုံ
အခြေခံ ဥပဒေကို အတည်ပြု
ဖက်ဒရေးရှင်း ကို..စကစ / NUG / ဗမာ / တရုပ် ကပေး မှရတာ မဟုတ်..ဖက်ဒရေးရှင်း ကို..
ကိုယ့်ပြည် နယ်သား..အများဆန္ဒ နဲ့..ရေးဆွဲ..အတည်ပြု ခြင်းနဲ့
ဟောင်းနွမ်း တဲ့ ပင်လုံစာချုပ် ကို
လူပမ်း..ညင်းခုံနေ မဲ့ အစား
အမေရိကန် ရဲ့ ဖယ်ဒရေး ရှင်းကို
ကူးယူ အသွင် ပြောင်း လိုက်ကြပါ..
NUG က ပြည်နယ် တိုင်းတွက်
US နဲ့ Australia တို့ရဲ့
အခြေခံ ဥပဒေ တွေကို
လိုတိုရှင်း.. ဘာသာပြန် ပြီး
အခြေခံ ဥပဒေရေး ဆွဲခြင်းမှာ
USSR ..ရုရှားလို မဟုတ်ဘူးနော်
USA လို..Australia လို
ဖက်ဒရေး ရှင်း ကို သွားဖို..
Development of Myanmar…
မြန်မာ့ တပ်မတော်သား များ..
ပြည်သူ နဲ့ ပေါင်း၍..အတ္တ ကိုယ်ကြိုး ရှာ အာဏာ ရှင်ကို
အဆုံးသတ် တိုက်ပွဲ ပါဝင်ဆင်နွဲချိန်..
မအလ/စကစ ဟာ..မြန်မာ ပြည်ကို ဂျောက်ထဲ ဆွဲချနေတာ
ကြည့်တတ်သူ တိုင်း မြင်တယ်..
စစ်ရေခြုံ ခိုင်းပြီး..မြို့ရွာ တွေထဲ
ခိုးဆိုး ဒပြတိုက် စေပြီး
မြန်မာ့ တပ်မတော် နဲ့ ပြည်သူ ကြား..ရန်တိုက် ပေးတယ်..
လာတိုက် ဖို့ စိမ်ခေါ်ပြီး..
စစ်တပ် နဲ့ ပြည်သူ ကြား..
ဘယ်တော့မှ ပြန်ညှိ မရအောင်
မနိုင် နိုင်တဲ့ စစ်ကို..ဇွတ်ထိုး တိုက်ခိုင်းရင်း..နှစ်ပေါင်း များစွာ ပြုစုပျိုး ထောင် ထားတဲ့..တန်းဖိုး ရှိတဲ့
professional တပ်မတော် သား
အသက်တွေကို..ကိုယ့်ပြည်သူ တွေကို ကိုယ်ပြန်သွားတိုက်ခိုင်း ရင်း…
ဆရာဝန်.. သူနာပြု.. ကျောင်းဆရာ..စတဲ့..လူငယ် ပြည်သူတွေ..သုံးတတ်ရင်..တပ်မတော် ရဲ့…အရေးကြီးဆုံး..အရံအင်အား
PDF.တွေ တန်ဖိုး ရှိ သလို
တပ်မတော် သား..တဦး တယောက် တိုင်းဟာ လဲ တန်ဖိုး ရှိတယ်…
PDFs တွေက..ကိုယ့် အသက်..
ကိုယ့်ရပ်ရွာ ပြည်သူ ရဲ့ အသက်အိုး အိမ်စည်းစိမ် ကို ကာကွယ် ဖို့ တွက်..တိုက်ပွဲ ဝင်နေကြရတယ်..
မြန်မာ့ တပ်မတော် ဟာ..မြန်မာ ပြည်သူ တို့ရဲ့..အသက်အိုးအိမ်..
စည်းစိမ် ကို..ကာကွယ်ဖို့ ဖြစ်တယ်..ပြည်သူ ကို သတ်ဖို့..
ဒပြတိုက် ဖို့..မြိုရွာ တွေကို မီးရှို့ ဖို့
PDF နဲ့ ပြည်သူ ကို..တိုက်ခိုင်း
သတ်ခိုင်း.. သော ကိုယ်ကြိုးရှာ
အရာ ရှိ များ ကို..ဖမ်းဆီး..အချုပ်ချ ကြ..
ရပ်ရွာ ထဲဝင်..ဒပြတိုက်.. မီးရှို့သော..စစ်ရေခြုံ.. ဒပြတပ်သား တိုင်းကို..ပစ်သတ်ကြ..
နိုင်ငံ နဲ့ လူမျိုး.. ကို ဂျောက်ထဲဆွဲ ချနေတဲ့..မအလ/စကစ..တို့ရဲ့
အာဏာ မှန်သမျှ ဖီဆန်ကြ..
မိမိ တပ်များ တွင်..ဖက်ဆစ် တော် လှန်ရေး..အလံများ ကို လွှင့်ထူ..
PDFs များ..တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု တပ်များ နဲ့..ကိုယ့်နယ်မြေ အလိုက်..ငြိမ်းချမ်း ရေးယူ…
ပြည်သူ တွေ တကယ် သတ်ချင်..
ဖမ်းချင် တာက..ပြည်သူ ကို ဒုက္ခ ပေးတဲ..ရွေလျား နေတဲ့ ဒပြ အုပ်စု…ပြည်သူ့ တပ်မတော် သားများမသတ်ချင်.. မသေချင် ရင်..ကိုယ့်
​တပ် ထဲမှာဘဲ ကိုယ်နေ..
ရွေ့လျား.. ခိုင်းတဲ့..အမိန့် တိုင်း
ဆန့်ကျင် ကြ..အမိန့် ပေး သူကို
ဖမ်းဆီး အချုပ်ချ ခြင်းဖြင့်..
ကိုယ့် အသက် ကို ကာကွယ်..
မြန်မာ့ တပ်မတော် သားများ..
နီးစပ်ရာ PDFs များ..EAO များ..NUG
အမိမြန်မာ ပြည် ကိုဂျောက် ထဲက
ပြန်ဆွဲ တင်ရင်း..ပြည်သူ နဲ့အတူ
အဆုံးသတ် တိုက် ပွဲ ဆင်နွှဲ ကြပါ
မအလ/စကစ နဲ့ သူထောက် တိုင်
အရာရှိ.. အရာခံ..သူခိုး ဒပြ တပ်သား များကို..သုတ်သင်
ရှင်းလင်းပြီး..ပြည်သိမ်းတိုက် ပွဲ ကို ကူညီ ဦးဆောင်ကြပါ..
ပြည်သူ့ တပ်မတော် ဦးဆောင် လမ်းညွှန် ကော်မီတီ..
ZAY YAR WIN says:
2021-10-31 at 5:51 PM
Love this program👍👍👍
2021-10-31 at 5:55 PM
Talented people who love humanity will definitely kill the dictatorship regime!!!!!
2021-10-31 at 5:57 PM
2021-11-01 at 12:46 AM
2021-11-01 at 12:57 AM
ငါလိုးမ(စကစ)ရဲ့မတရားသူကြီးများလုပ်နေသူအားလုံး နှင့်၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုများအားလုံးငါတို့တိုင်းပြည်(မြန်မာပြည်မှာ)နေခွင့်မရှိတော့ပါ၊ပြေးချင်ရင်ပြေး၊မပြေးရင်တော့အသေခံဘို့စည်းစားကြပါ၊အမျိုးယုတ်တရားရေးဥာန(မတရားသူကြီး)ကောင်တွေနဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုတွေ၊မသေချင်ရင်ပြေးကြ၊ငါတို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကကြူပင်ခုတ်ကြူငုတ်မကျန်ပဲ၊ "နွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရမည် " "အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်" 💣🔫🧨🗡⚔🏹🚀🚀🚀
WANNA Music Channel says:
2021-11-01 at 7:15 AM
အသံလေး နဲနဲတိုးနေတယ်ဗျာ နောက် Episode တွေကျရင် အသံ နဲနဲ ကျယ်ပေးပါလာဗျာ🙏❤️
နောက်အပတ်တွေမှာလဲ သတင်းကောင်းတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါနော် စုံထောက်မမ
Up Mo says:
2021-11-01 at 1:11 PM
2021-11-01 at 1:53 PM
အ ရမ္း good တယ္ အရမ္း မွန္ တယ္ လုပ္ ရပ္ ဘဲ
U Htut says:
2021-11-01 at 2:01 PM
Really good discussion 👍👍👍
Maownmar Lwin says:
2021-11-01 at 6:16 PM
အရမ်း ကောင်းပါတယ် နိုင်ငံ သားတိုင်းသိသင့်ပါတယ်
Bwae Hot Kham says:
2021-11-02 at 12:38 PM